Tarot နှင့်ဘော့ Hickman အကြားအမြင်ရအလတ်စားနှင့်အတူရာသီခွင် - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဗီဒီယိုများ > ဘော့ Hickman အကြားအမြင်ရအလတ်စားနှင့်အတူ Tarot နှင့်ရာသီခွင်
ဘော့ Hickman အကြားအမြင်ရအလတ်စားနှင့်အတူ Tarot နှင့်ရာသီခွင်
Megan မေလ 20, 2017 ဗီဒီယိုများTagged ဗေဒင်ဆရာ, ချဉ်ကြော်, ဗေဒင်အတတ်ပညာ, horoscope, horoscopes, magick, အလယ်အလတ်, နတ်ကတော်, oc ..., မှော်အတတ်, အဘိဥာဏ်, အကြားအမြင်, tarot, tarot ကတ်များ, Wicca, wiccan, ရာသီခွင်17 မှတ်ချက် Tarot နဲ့ Bob Hickman အကြားအမြင်ရအလတ်စားနှင့်အတူရာသီခွင်အပေါ်
ငါ Tarot နှင့်ရာသီခွင်အပေါ်မှာငါ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဝေမျှအဖြစ်လှည့်လည်စုသိမ်းမည်။
ဘော့နှင့်အတူပုဂ္ဂလိကဖတ်ရန်: [အီးမေးလျ protected]
အကြားအမြင်ရ Bob ၏စာအုပ်များရယူပါ: http://www.robert-hickman.com/
Buy Witchy Stuff Cool: http://www.rarewiccaspells.com/
သမ္မတကတော် Angela ရဲ့ YouTube ကိုလိုက်နာပါ:
Myriam Gutierrez says:
မေလ 20, 2017 မှာ 2: 23 နံနက်
ဟယ်လို! ကိုယ့်ကိုသင့်ချန်နယ်ကိုတွေ့ကြောင့်ကိုချစ်! ငါ Scorpio- သေခြင်းတရားကဒ်ပေါ့။ ငါ့ချစ်ကောင်လေးဒါသည်သူ၏ကဒ်ကြယ်ကဒ်ဖြစ်ပါသည်ကုံပါ! သင့်ရဲ့ mom, အတူအချိန်ပျော်မွေ့?
Reply အတွက် Log
ဟေးဘော့အမြဲအဖြစ် vids ကိုချစ် :) ။ အကြှနျုပျ၏နိမိတ်လက္ခဏာကုံဖြစ်ပါတယ်🙂
Krista ရောမ says:
ငါသည်ဤခေါင်းစဉ်ကိုချစ်! ငါ The Star နှင့် The Moon Tarot ငါ၏အစာဖတ်ခြင်း "စီးပွားရေးလုပ်ငန်း" ကိုခေါ်ပါ။ The Star လည်းငါ့အကြိုက်ဆုံးကဒ်ဘော့ဖြစ်ပါတယ်။ ဟားဟား။ ကျနော်တို့ကအမြဲ twinning နေကြသည်။
မာရီယာ Zarate says:
မင်္ဂလာပါကျနော့် Scorpio ဖြစ်ကြောင်းကို
Parsnip ဘာဂါ says:
ငါ Capricorn နဲ့မာရျနတျကဒ်ကိုငါ့နိမိတ်လက္ခဏာကိုကိုယ်စားပြုသောငါ၏ Tarot ကဒ်ဖြစ်ပါသည်ဖြစ်၏။
The Sun ကဒ်ဒါအပြုသဘောဖြစ်ပါတယ်။ ကပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်တောင်မှအခါတုန်းပဲအပြုသဘောဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါဘော့ငါ၏အနိမိတ်လက္ခဏာကိုကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး tarot နက္ခတ်ဗေဒင်ဆက်သွယ်မှုရှိခဲ့သည်ကြိမ်မြောက်မသိခဲ့ပါ။
သငျသညျမှညီအစ်ကိုကိုချစ်ရုံနဲ့ Lady Angela subbed
ဘုရားသခင့ XXXX သငျသညျကိုကောငျးကွီးပေး
တိမောသေ Gallagher says:
ဟုတ်ပါတယ်, တခါလွန်ခဲ့တဲ့ - သိပ်ဝေး ... ငါတကယ် Tarot နှင့်အတူကစားပျော်မွေ့ခဲ့ကြဘူး။ ရရှိနိုင်နည်းပညာသစ်မျိုးကိုကြောက်စရာနိုင်ပါတယ်အတူအနာဂတ်ရင်ဆိုင်ခြင်း - (တချို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းမေးခွန်းများကိုပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်သို့သော်အယူအဆအချို့ကိုသစ်ကိုမျိုးရိုက်ထည့်ပါပါလိမ့်မယ်။ ) ။ = သင်ရှိသည်ဘူးသောအရာတို့ကိုခံစားပါ။
လူးဝစ်နှင့် Gigi, အသစ်ရဲ့အဖော်မွန်များဖြစ်လာကြပါပြီ။ (အိုကေ, ငါကအရ ... )
Angela McAlister RareWiccaSpells says:
= ဒီဗီဒီယို LOVE) နှင့်ဟုတ်တယ်ဘော့, ငါအဘို့အဖတ်နေစေခြင်းငှါအသီးအသီးသည်နိမိတ်လက္ခဏာကိုတိကျတဲ့ကတ်အသုံးပြုမှုကိုအောင်လုပ်ပါ။ ငါတိကျတဲ့ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာကိုဖတ်ရသောအခါတခါတရံငါပြန့်နှံ့ရဲ့ထိပ်မှာထားပါ။ သငျသညျမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ & ပွေ့ဖက်အမြဲ) အို (
မင်္ဂလာပါ GiGi ။ သင့်ရဲ့ Gucci ရှပ်အင်္ကျီလည်းဘော့ကိုချစ် =)
ဟေ့ငါ့အနိမိတ်လက္ခဏာကို scorpio နိုဝင်ဘာလ 17 2001 ဖြစ်ပါတယ်ဈငါ့နိမိတ်လက္ခဏာအံ့သြခဲ့ပါတယ်
Lisa ကို G. အ says:
မင်္ဂလာပါဘော့, ငါ၏နိမိတ်လက္ခဏာကို Gemini မေလ 26, 1963 ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုကဒ်ငါ့ကိုကိုယ်စားပြု? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Tubies ဟေ့! ပတ်ပတ်လည်ကိုစုသိမ်းနှင့်ရဲ့ဆန်းကြယ်မှုများ Tarot နှင့်ရာသီခွင်ကိုစူးစမ်းပါစေ!
တစ်ဦးကမှတ်ချက် Leave ပြန်ကြားချက် Cancel